Saliida Gadhka, Bacda iyo Shaamboo - Maxay Mid waliba Ku Fiican Tahay? | Ragga Stylish
Sida loo isticmaalo saliida gadhka, beeyada iyo shaambo
Haddii aad gadh leedahay, nadaafaddaada iyo qalabkaaga quruxda badani ma noqon karaan saliid, beeyo iyo shaambo la'aan. Waa ilaa saddex alaabada lagama maarmaanka u ah timaha wajiga si ay had iyo jeer u muuqdaan kuwo aan cillad lahayn.
Halkan waxaan ku sharaxaynaa doorka ay ka ciyaarayaan xaalada gadhkaaga iyo sida saxda ah ee loogu isticmaaloHad iyo jeer maskaxda ku hay in qof kastaa u baahan yahay inuu helo jadwalka sida ugu fiican ugu shaqeynaya kiiskooda, maadaama gar kasta uu leeyahay astaamo gaar ah.
2 Bacda iyo saliida
Shaambo timaha waxay gadhka ka dhigi kartaa mid aad u qallafsan waxayna qallajin kartaa midabka. Codsashada shaambo leh qaacido gaar ah oo loogu talagalay garka - kuwaas oo guud ahaan jilicsan - waa waxa ugu fiican ee shaqeynaya marka aan u baahanahay inaan dhaqno timaha wajiga.
Shaambo garka waxaa loo isticmaalaa si la mid ah shaamboo timaha. Si fudud ugu xoq qadar yar calaacalaha gacmahaaga oo ku duug timaha iyo maqaarka hoostiisa sheyga. Ugu dambeyntii, biyo raaci biyo badan.
Joogtayntu waa arin runti midkasta ku tiirsan. Waad u dhaqi kartaa garkaaga maalin kasta, saddexdii maalmoodba mar, iyo xitaa usbuuciiba mar. Ma jiro qof ka fiican naftaada inuu xukumo haddii durdur wanaagsan oo biyo diirran intaad qubeysato maalin kasta kugu filan tahay ama aad mar horeba u baahan tahay shaambo dhammaystiran.
Bacda iyo saliida
Waxyaabahan is kaabaya waxay u adeegaan inay quudiyaan timaha wajiga iyo maqaarka hoostiisa, laakiin saamaynta ay ku leeyihiin muuqaalka garka way ka yara duwan yihiin. Ahaanshaha fudud, saliidaha waxay bixiyaan natiijo dabiici ah. Haddii aad leedahay gadh gaaban ama aad jeceshahay gadhkaaga dabiiciga ah, waxaad doorbidi kartaa saliid.
Iyada oo ku saleysan subagga iyo wax-soosaarka, baaluqaduhu waa isku mid dabiici, in kasta oo ay leeyihiin awood qaboojin ballaaran. Waa weyn ee wax-u-qabashada iyo jilicsanaanta kuwa qufulada aan sharci-darrada ahayn ama u yeelo qaab gaar ah gadhka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Sida loo isticmaalo saliida gadhka, beeyada iyo shaambo
Sababaha loo qoro fasalada qoob ka ciyaarka